जे नहुनु पर्ने थियो त्यही भयो « प्रशासन
जे नहुनु पर्ने थियो त्यही भयो
असोज १५ गते बिहीबारका दिन साबिककै दिन झैँ सिँहदरवारको मूल गेटमा सुरक्षाकर्मीबाट ज्वरो परीक्षण पश्चात् सिँहदरवार प्रवेशका लागि म योग्य भए । शाखाको केही विशेष काम भएकोले त्यसकै तयारीमा दिनभरि जुटियो । करिब १ बजे पछि असाध्यै टाउको दुख्यो । हुन त म माइग्रेनको दीर्घ रोगी हुँ, माइग्रेन नै भयो जस्तो लाग्यो र एउटा पेन किलर खाएर काम गरेँ ।
५ बजे पछि घर गएँ । घर पुग्दा असह्यै पीडा भइरहेको थियो । जीउ थरथर काँपी रहेको थियो । केही खानेकुरा खाएर फेरि एउटा पेन किलर खाएर सुतेँ । राती करिब १ बजे व्युँझिँदा उच्च ज्वरोले सारा शरीर दुखेर हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए । आँखामा असाध्यै पीडा भइरहेको थियो । भतभती पोलिरहेको थियो । टाउको चड्की रहेको थियो । यस्तो लाग्दै थियो कि अहिल्यै दुई टुक्रा हुन्छ ।
मुख सुकेर टप टप भइरहेको थियो । ओठ पट्पटी फुटेका थिए । अनुहारको हड्डीसमेत दुखेर असह्य एवं अनौठो पीडा भइरहेको थियो । के के हो के के ! म एकोहोरो बर्बराई रहेँ । श्रीमानले ज्वरो नापेर प्यारासिटामोल खान दिनु भएछ, मलाई याद पनि छैन । बोल्दा बोल्दै कति बेला निदाए थाहै भएन ।
बिहान व्युँझिँदा शरीर गलेर उठ्नै सकिनँ । अरू बेलाको भन्दा फरक अनुभव भइरहेको थियो । ज्वरो अझै उच्च थियो । श्रीमानले जाउली ल्याएर खान दिनुभयो । त्यस पछि फेरि प्यारासिटामोल खाएँ र कोरोना पो भयो की, ल म आइसोलेसनमा तलको कोठामा बस्छु, अब मेरो नजिक कोही पनि नआउनु भन्दै ओछ्यानबाट तन्ना, ब्ल्याङकेट, सिरानी च्यापेर तल रुममा आएँ ।
मेरो अन्य सामानहरू ल्याउन सबैले सहयोग गर्नुभयो । शरीर पुरै गलेर उभिन पनि सकिरहेको थिइन् । यस्तो ज्वरो कहिल्यै आएको थिएन । शुक्रवार दिनभरि उच्च ज्वरोसँग पैठाजोरी खेल्दैमा बित्यो । मनमा हर तरङ्गका सवालहरू आइरहे । कता कता डर, चिन्ता, नरमाइलो लागिरह्यो । घरमा सबैले फ्लु हो ठीक हुन्छ भनी सान्त्वना दिई रहे । तर म भने कोरोना सङ्क्रमण भएकोमा विश्वस्त हुँदै मनलाई दह्रो बनाउँदै थिएँ । किनकि मेरो शरीरको भाषा मैले बुझी सकेको थिएँ ।
शरीरले नितान्त फरक लक्षणहरू देखाइरहेको थियो । डराइरहेको थियो । वास्तवमा जुनसुकै रोगको औषधी उच्च मनोबल नै हो । ज्वरो नाप्दै ६–६ घण्टाको फरकमा प्यारासिटामोल खाएँ, दिनमा ३ पटक बाफ लिएँ । गुर्जो लगायतका धेरै जटिबुटी हालेर श्रीमानले काँढा बनाएर दिनुहुन्थ्यो र दिनमा ३ पटक यस्तो काँढा खान थालेँ ।
जिब्रोमा कुनै स्वाद र नाकमा कुनै गन्ध थिएन । केही खान मन लाग्दैनथ्यो तर परिवारको करले खान्थेँ । फलफूल, जुस, सुप प्रशस्तै खाएँ । बाबुले टमाटर र पुदिनाको अचार बनाएर दिन्थ्यो, हट लेमन दिन्थ्यो, तर स्वादै आउँदैनथ्यो । यसै क्रममा अफिसमा दुई जनालाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएको जानकारी पाएँ । त्यसबाट म झन् आश्वस्त भए कि म पनि सङ्क्रमणमा छु भनेर ।
शनिवारदेखि ज्वरो १०२ डिग्रीमा झर्‍यो र कोरोना टेस्ट गर्न जाने बारेमा घरमा सल्लाह गरेँ । लक्षण देखिएको ७२ घण्टा पछि टेस्ट गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव अनुसार आइतबार ३ बजे शुक्रराज ट्रपिकल हस्पिटल टेकुमा गएर स्वाब दिएँ । रिपोर्ट दुई दिन पछि आउने जानकारीसँगै घर आएँ । दिनभरि ज्वरो १०१ डिग्री आइरह्यो ।
ज्वरोसँगै शरीर दुख्ने र थकाई लाग्ने अवस्था कायमै रह्यो । अफिसबाट लगातार सबैले फोन गरेर मलाई सान्त्वना दिइरहनु भयो । तर आखिरमा जे नहुनु पर्ने थियो, त्यही भयो, मेरो रिपोर्ट तीन दिन पछि पोजेटिभ आयो ।
म पुरै आइसोलेसनमा बसेको हुनाले परिवारमा अरूलाई सङ्क्रमण देखिएन वा सर्न पाएन । बुधवारको दिन हस्पिटलबाट फोन आयो ‘तपाईँलाई आफ्नो रिपोर्ट थाहा छ नि’ भनेर । मैले थाहा छ भनेँ र म उच्च ज्वरो आउने वित्तिक्कैदेखि घरमा आइसोलेसनमा छुँ भनेँ । त्यसो भए श्वास फेर्न गाह्रो भयो वा छाती टाइट भयो भने अस्पताल आउनु भनेर उताबाट फोन राखे र मैले पनि हुन्छ भनेँ ।
साईकोलोजी पनि अचम्मको चिज रहेछ । अघिसम्म मलाई केही समस्या नभएकोमा अब भने श्वास फेर्न गाह्रो भए जस्तो, छाती पनि गह्रुँगो भएको जस्तो हुन थाल्यो । मैले यो कुरा परिवारमा भनेँ । श्रीमान् र उहाँको साथीले नेपालको टप कोरोनासँग सम्बन्धित प्याथोलेजिष्टसँग मलाई कुरा गराउनु भयो । मेरो कुरा सुने पछि ‘तपाईँलाई खासै समस्या रहेनछ खाली मानसिक असर परेको हो, नडराउनु ठीक हुन्छ’ उनले भने ।
जति नै ज्वरो आए पनि प्यारासिटामोलबाहेक अरू औषधी नखान र धेरै भन्दा धेरै तातो पानी तथा झोल कुरा खान सुझाए । त्यसै गरी यस्तो बेलामा भिटामिन ‘डी’ को कमी हुने हुनाले भिटामिन ‘डी’ र ‘सी’ को सप्लिमेन्ट खान र कम्तीमा पनि १ घण्टा घाममा बस्न भने र मैले उनले भने बमोजिम गरेँ ।
त्यसको अलावा आफ्नो व्यक्तिगत सरसफाइमा विशेष ध्यान दिएँ । प्रत्येक दिन तातो पानीले नुहाउने र कपडा फेर्ने गरेँ । आफ्नो कोठा डिटोल पानीले पुछेँ । दिनदिनै तन्ना, सिरानीको खोल फेरेँ । ब्ल्याङकेट घाममा सुकाउने गरेँ । यसो गर्दा कोरोनाका कीटाणुहरू जो म बोल्दा, खाँदा उछिट्एिर कोठामा वा मेरो कपडामा वा हावामा परेका थिए, ती नष्ट भए र म पनि छिटो निको हुन थालेँ । अहिले म पूर्णरुपमा स्वस्थ भएको अनुभव गरिरहेको छु ।
वास्तवमा रोगीको मनोविज्ञानले पनि ठूलो भूमिका खेल्ने रहेछ । मैले ती विशेषज्ञसँग कुरा नगरेको भए, उनको सान्त्वना नपाएको भए, म डराएर हस्पिटल पुगिसकेको हुने थिएँ र थाहा छैन अरू के के लक्षणहरू म मा देखिए जस्तो हुन्थ्यो होला । र, निको हुन समय लाग्थ्यो होला । तसर्थ सङ्क्रमित व्यक्ति संयमित र धैर्यवान् हुन पनि जरुरी छ ।
त्यसै गरी हामीसँग कम्तीमा पनि एउटा थर्ममीटर, एउटा अक्सिमिटर प्रत्येक घर घरमा हुन जरुरी छ । कोभिड-१९ ले रगतमा अक्सिजनको मात्रा घटाइदिने हुनाले श्वास फेर्न कठिन भई मृत्युसमेत हुन सक्छ । अक्सिमिटरबाट औँलाको सहायताले रगतमा रहेको अक्सिजन थाहा पाउन सकिन्छ र ९० भन्दा कम अक्सिजन भएमा तुरुन्त हस्पिटल जानुपर्छ वा अक्सिजन लिने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । तर यो कुरा स्वयं डाक्टरहरुबाटसमेत आउन सकिरहेको छैन । उल्टै बेहोस हुन लागेमा मात्र अस्पताल आउनु होला भनिन थालिएको छ । तर बेहोस कुन अवस्थामा कसरी हुन सक्छ ? त्यसको रोकथामका उपायहरूको बारेमा जानकारी पाउन सकिएको छैन ।
तसर्थ हामी स्वयं सजग हुन जरुरी छ । मेरो अनुभवमा कोरोना सङ्क्रमितले ३/४ वटा कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । पहिलो–ज्वरो छ कि छैन ? दोस्रो–रगतमा अक्सिजनको मात्रा कति छ ? तेस्रो – शरीरमा भिटामिन ‘डी’ र ‘सी’ को कमी हुन नदिने, चौथो–घाँटी र फोक्सोमा समस्या छ कि छैन ? यिनै लक्षणको आधारमा उपचार गर्नुपर्छ र निको पनि भइन्छ ।
वास्तवमा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्दागर्दै पनि म सङ्क्रमित भएँ । तसर्थ कोभिड–१९ सामान्य रुघाखोकी मात्रै होइन, यसलाई हेलचेक्र्याइँ नगरौँ । हावाबाट पनि सर्ने सम्भावना बढी भएकोले स्वास्थ्य प्रोटोकलको पालनासँगै यसलाई जिन्दगीको अभिन्न अङ्गको रूपमा स्वीकार गर्दै जीवनलाई सहज बनाउँदै जानुको विकल्प हामीसँग छैन ।
Tags : कोभिड-१९ कोरोना सङ्क्रमण सृजना तिवारी